Ny angona vaovao dia manambara fa mitombo hatrany ny App Store | Vaovao IPhone
Ny angona vaovao dia manambara fa ny App Store dia mitombo amin'ny hafainganam-pandeha tsara
ny fivarotana app manana takelaka azo atao malalaka ho an'ny mpampiasa izy ireo. Na izany aza, indraindray tsy mijanona mieritreritra isika fa ao ambadiky ny fampiharana lehibe misy vondrona mpamorona izay nandany ora maro namoronana azy. Etsy ankilany, ny dokam-barotra, ny vidin'ny rindrambaiko ary ny fividianana fampiharana dia miteraka fidiram-bola izay mandeha mivantana amin'ny mpamorona.
Infographic vaovao navoakan'ny SensorTower dia nanambara izany Mpanamboatra 164 no nahita ny fandreseny voalohany miaraka amin'ireo fampiharana azy raha ampitahaina amin'ny 88 ao amin'ny Google Play Store. Ankoatr'izay, ny infographic dia hita taratra amin'ireo sokajy roa izay nitombo indrindra nandritra ny taona. Lazainay aminao.
Mitombo hatrany ny App Store
Tsy mandainga ny angona. SensorTower dia nanomana fandinihana, toy ny isan-taona, mamakafaka izay mpandrindra manana karama mihoatra ny $ 1 tapitrisa amin'ity taona ity, na amin'ny App Store na amin'ny Play Store. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mamakafaka tsy ny haavon'ny fahalianan'ny mpampiasa amin'ny fahazoana vaovao ao anaty ny application ihany, fa koa ny fandraisan'anjaran'ireo mpamorona amin'ny fampiroboroboana ny fampiharana azy ireo amin'ny fivarotana iray na hafa.
Tamin'ny taona 2018, nahatratra an'io ny App Store 143 mpamorona mahazo mihoatra ny 1 tapitrisa euro, 15% mihoatra ny tamin'ny taon-dasa. Fa kosa, mahazo ny antsasany ny Google Play Store, 88 mpamorona, miaraka amin'ny fitomboana 24%. Na dia hitantsika aza fa lehibe kokoa ny fitomboan'ny Play Store, dia hitanay fa ny fahasamihafana misy eo amin'ireo magazay roa dia saika avo roa heny. Amin'izao fotoana izao ny App Store dia miteraka avo roa heny amin'ny vola miditra, sahabo noho ny Play Store.
Ao amin'ity grafika ity, SensorTower koa mampiseho antsika fironana. Ny fironana manafika sokajy fampiharana hafa. Hatramin'izao, ny vola miditra betsaka dia novokarina teo amin'ny sokajy "Lalao". Na izany aza, amin'ity taona 2018 ity dia hitantsika fa kely kokoa ny isan-jaton'ny mpamorona mihoatra ny iray tapitrisa euro miaraka amin'ny lalao. Ny tsy itovizany dia mizara sokajy hafa toy ny «Fomba fiainana.
Ireo data ireo dia tsy manome afa-tsy fampahalalana extrapolated kely anay satria ny statistika dia angonina miaraka amin'ny angona avy any Etazonia. Tsy azonay fantarina ny fiantraikan'ireo mpamorona ireo ihany any amin'ny firenen-kafa raha tsy manadihady ny habetsaky ny angona azo avy amin'ny fanitarana fampiharana iray manerana ny kaontinanta samihafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Ny angona vaovao dia manambara fa ny App Store dia mitombo amin'ny hafainganam-pandeha tsara
Izay antenainay avy amin'ny Apple ho an'ny 2019
Ny iPad Pro 2018 dia mifanaraka amin'ny fenitra kalitaon'ny Apple